Genesis of Violence in Zimbabwe - ZimShoppingMalls
Home » Books » Nonfiction » Genesis of Violence in Zimbabwe
Father Fidelis Mukonori is the director of the Centre for Peace Initiatives in Africa, a regional peace organisation based in Harare which works towards achieving a sustainable, stable and peaceful Zimbabwe. The organisation is committed to conflict prevention, management, and resolution to ensure the people of Zimbabwe and Africa at large can experience peace, development and good governance.He portrays the historical origin of violence in Zimbabwe from 1879 to the present in order to enable the people of Zimbabwe to find a way forward, regardless of ethnicity, colour or creed. The book discusses ways and means of moving Zimbabwe from a culture of violence to a culture of peace by promoting dialogue, stability and security in Zimbabwe.
Genesis of Violence in Zimbabwe quantity
SKU: gvzhob Categories: Nonfiction, Other Books Tags: catholic commission for justice and peace, centre for peace initiatives in africa, chimurenga, chishawasha, disidents, electoral violence, father fidelis mukonori, jesuits in zimbabwe, matabele land disturbances, mugabe, murambatsvina, political parties, racial discrimination, silveira house, zimbabwe books, zimbabwe independence
Father Fidelis Mukonori is the director of the Centre for Peace Initiatives in Africa, a regional peace organisation based in Harare which works towards achieving a sustainable, stable and peaceful Zimbabwe. The organisation is committed to conflict prevention, management, and resolution to ensure the people of Zimbabwe and Africa at large can experience peace, development and good governance.
He portrays the historical origin of violence in Zimbabwe from 1879 to the present in order to enable the people of Zimbabwe to find a way forward, regardless of ethnicity, colour or creed. The book discusses ways and means of moving Zimbabwe from a culture of violence to a culture of peace by promoting dialogue, stability and security in Zimbabwe.
Be the first to review “Genesis of Violence in Zimbabwe” Cancel reply